बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिकाको शव १० महिना देखि अस्पतालमा, सल्लाझैँ अामा सुसाइराहिन्……. – Halkaro
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी बालिकाको शव १० महिना देखि अस्पतालमा, सल्लाझैँ अामा सुसाइराहिन्…….
प्रकाशित मिति : २०७४, २४ फाल्गुन बिहीबार March 8, 2018
काठमाडौँ । स्वयम्भूको तल्लो फाँटस्थित डल्लु चौतारानजिकै छिँडीजस्तो डेरामा ३४ वर्षीया सन्तोषी नेपाली भेटिइन् । उनलाई अरूका घरको धन्दा, होजियारी कम्पनीको ज्यालादारी काम र काखका दुई छोराको हेरविचार गर्नै भ्याइनभ्याई छ । यहीबीचमा उनलाई बुधबारदेखि फेरि जिल्ला अदालत धाउनु परेको छ ।
आदेशमा अभियुक्त चौधरीलाई ‘मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म पुर्पक्ष थुनामा राख्ने’ भनिए पनि यो सरकारवादी मुद्दामा हार भएमा पुनरावेदन जान सक्ने अथवा ‘साधक जाँच’ गराइनेसम्मको कानुनी व्यवस्था छ । कान्तिपुरबाट साभार
← पूर्व सांसदले उडाए ३१ ल्यापटप
पासपोर्ट च्यातेर चेपाङका सारथी →